Iindlela ezi-3 zeXesha leXesha leNdawo zeNdawo yokuSebenzisa ukuSebenza | Martech Zone
Iindlela ezi-3 zeXesha leXesha leNdawo eziSebenzayo zokwandisa ukuzibandakanya
NgoLwesine, Agasti 11, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Xa abantu becinga malunga nokwenza umxholo, bacinga ngedatha yobuqu ebandakanyiweyo kumxholo womyalezo we-imeyile. Akukho malunga nje Ngubani ithemba lakho okanye umthengi, ikwangoku apho bazi. Ubeko lwasekhaya lithuba elikhulu lokuqhuba ukuthengisa. Ngapha koko, iipesenti ezingama-50 zabathengi abakhangela kwalapha kwi-smartphone yabo batyelela ivenkile ngaphakathi kosuku, nge-18% ekhokelela ekuthengeni
Ngokwe-infographic ngu Microsoft kwaye VMob, ukusebenzisa idatha yexesha lokwenyani kunokukhokelela ekudalweni komxholo owenzelwe wena. Umzekelo, umthengisi olungelelanise ukuthengisa kwamaxesha athile kunye nemiyalezo yokukhuthaza kunye neendlela zemozulu zalapha ekhaya wabona intengiso inyuka nge-18%. Iindaba
Iindidi ze-3 zokwenza umntu onokuzibandakanya ukonyusa izinga lokucofa, ukuzibandakanya, kunye nokuguqula amathemba onke onokuthi ungawahoyi:
Indawo -Yila intengiso kunye nokunyusa ngokusekwe kwindawo yomsebenzisi.
I zithuthi -Nikezela ngedatha yexesha-lokwenyani ukuhambisa ithemba lakho kwindawo efanelekileyo.
yemozulu Sebenza nee-API zemozulu ukulungelelanisa ukuthengisa kwakho kunye nemozulu ezayo okanye izilumkiso zemozulu.
Intengiso yeDynamic, umxholo wewebhu onamandla, umxholo we-imeyile onamandla, izilumkiso ze-imeyile, kunye nezilumkiso eziphathwayo ezinokuthi zihanjiswe ukulungiselela le datha ifumanekayo.
tags: ukwandisa ukubandakanyekaindawoindawo apiidatha yendawomicrosoftumxholo wakhoumxholo wexesha lokwenyanizendlelaapi yezithuthiidatha yezithuthivmobyemozuluImozulu yezuluIdatha yemozulu
Indlela oShishino abafumana ngayo abaThengi ngePokémon Go